Wine and Fish Pairing – Cellar Door Distribution
Wine and Fish Pairing
home / wine knowledge / Wine and Fish Pairing
ဒီနေ့အတွက် ရွေးချယ် ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ဝိုင်အမျိုးအစားအလိုက် တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ ငါးအမျိုးအစားတွေအကြောင်းပါ။ 🥂🍽🍽🍽
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ White Wine ဆိုရင် ငါးနဲ့ တွဲဖက် သုံးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဝိုင်အမျိုးအစားတွေအလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ ငါးအမျိုးမျိုးအကြောင်းကို Cellar Door Distribution မှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
✅ အီတလီနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ Pinot grigio၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Sauvignon Blanc နဲ့ Chardonnay, Champagne တို့ကိုဆိုရင် Baked လုပ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ငါးတစ်မျိုးမျိုး နဲ့တွဲဖက်သုံးဆောင်သင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ – Baked Fish with Lemon, Lemon-butter-baked-white-fish)
✅ Medium flavor fish လို့ခေါ်တဲ့ ရေချိုငါး အမျိုးအစားတွေကို Light to Medium Bodied ဝိုင်များဖြစ်တဲ့ New Zealand နိုင်ငံထုတ် Sauvignon Blanc, Sémillon နဲ့ Pinot gris ဝိုင်အမျိုးအစားတွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ – ငါးခူ)
✅ အရသာ အနည်းငယ်ပြင်းတဲ့ Oaked Chardonnay, dry Lambrusco, vintage Champagne, dry rosé ဝိုင်၊ အီတလီနိုင်ငံထုတ် Chardonnay နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေ ထွက်ရှိတဲ့ White Wines တွေကိုတော့ Meatier fish လို့ခေါ်တဲ့ Salmon ငါး၊ Tuna ငါး တို့နဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
✅Dry Riesling, cava နဲ့ dry rosé ဝိုင်တွေကိုတော့ mackerel, sardines ငါးဟင်းလျာနဲ့ တွဲဖက်နိုင်သလို Smoked လုပ်ထားတဲ့ Salmon ငါး နဲ့လည်း တွဲဖက်နိုင်ပါတယ်။
ဝိုင်အမျိုးအစားအလိုက် တွဲဖက်မြည်းစမ်းသင့်တဲ့ ငါးအမျိုးအစားအကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပေးခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ဝိုင်ချစ်သူတို့က ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဝိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ သိကောင်းစရာအကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကို Cellar Door Distribution ရဲ့ Facebook Page မှာ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု မမေ့နဲ့ဦးနော်။
Credit to: Regal Fish Blog
Asavery general rule, fish is paired with white wine. But some fish pair very well with rosés and lighter reds. So today, we are going to share you wines and fish that you need to know.
✅ Mild flavor fish with thin fillets such as sea bass and lemon sole pair well with lighter white wines such as Italian Pinot grigio, Sauvignon Blanc from France and French Chardonnay and Champagne.
✅ Medium flavor fish with thicker fillets and large flakes go well aromatic and light to Medium bodied wines like New Zealand Sauvignon Blanc, Sémillon and Pinot gris. Most fish fall under this category and include species like trout, ray, cod, hake, haddock, redfish, coley, ling and halibut.
✅ Meatier fish like monkfish, salmon, swordfish and tuna likeameatier wine. They pair well with stronger tasting wines like oaked Chardonnay, dry Lambrusco, vintage Champagne, dry rosé, Italian Chardonnay.
✅ Very strongly flavor fish like mackerel and sardines (very high in umami, the fifth taste) can be paired with dry Riesling, cava and dry rosé. These wines, along with vintage Champagne also work well with smoked fish such as salmon and trout